काठमाडौंको उपमेयरमा दुई तिहाइभन्दा बढी मतसहित सुनिता अगाडि, कसले कति मत पाए ? - Nepalese Times
काठमाडौंको उपमेयरमा दुई तिहाइभन्दा बढी मतसहित सुनिता अगाडि, कसले कति मत पाए ?
Nepalese Times May 14, 2022 (2 Week ago) 4358 Views
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता कायमै राख्दा उपमेयरमा भने सुनिता डंगोलले फराकिलो अन्तरले अग्रता बनाएकी छिन् ।
मेयरको पेचिलो प्रतिस्पर्धा भइरहँदा उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डंगोलले फराकिलो अन्तरालमा लिड गरेकी छन् । प्राप्त विवरण अनुसार ७५ भोटको गणना सकिँदा सुनिताले ५२ मत ल्याएकी हुन् ।
यो दुईतिहाइभन्दा बढी हो । उपमेयरका अन्य उम्मेदवारको मत संख्या प्राप्त भएको छैन । काठमाडौंको मतगणना सुस्त गतिमा भइरहेको छ । एउटै मत गन्न १० मिनेटजति लाग्ने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ३२ बाट मत गणना चलिरहेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना सर्वाधिक चासोको केन्द्रमा छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा कसले बाजी मार्ला ? भन्ने आम चासो रहेका छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार सिर्जना सिंह, नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित र स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहबीच कडा प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको हो ।
हालसम्म बालेन्द्र शाह ४३ केशव स्थापित ३८ र सिर्जना सिंहले ३७ मत ल्याएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको ‘क्रेज’ पनि ह्वात्तै बढिरहेको छ । यो पटकको स्थानीय तहको चुनावमा एमालेका स्थापित र कांग्रेसकी सिंहलाई बालेन शाहका कारण अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।